တရုတ် KLT-10000LED ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |ပိုတောက်ပ
ဟိုက်ဒရောလစ် Mast ● LED မီးများ ● မီးမျှော်စင်များ
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် မိုဘိုင်းအလင်းမျှော်စင်။၎င်း၏ 6X4000W LED အလင်းတန်းများကြောင့် KLT-1000LED သည် အလွန်မြင့်မားသောအလင်းရောင်ပေးနိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့် LED မီးလုံးများ၏ အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို ပေးဆောင်သည်။အဆိုပါ အကျိုးကျေးဇူးများတွင် မှန်နှင့် မီးသီးများ မရှိခြင်းကြောင့် ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ကြီးမားသော ဆီတိုင်ကီနှင့် လောင်စာဆီ သုံးစွဲမှုနည်းသော အင်ဂျင်သည် လောင်စာဆီ ကြားကာလကို နာရီ 90 ထက်ပို၍ အသုံးပြုရန် တွန်းအားပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ ဒေါင်းလုဒ်လက်စွဲစာအုပ်
KLT-1000LED တွင် အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်အတွက် အလင်းမျှော်စင်၏ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို စီမံခန့်ခွဲရန် အထူးလေ့လာထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခု တပ်ဆင်ထားပါသည်။
ပိုမိုတောက်ပသော LED မီးချောင်းများ
Fuzhou Brighter Electromechanical Co, Ltd မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် 6x400 W မြင့်မားသော ထိရောက်မှုရှိသော LED မီးလုံးများ။ ရွေးချယ်စရာအဖြစ် အကွာအဝေး၏ အမြင့်ဆုံးအလင်းရောင်ပေးနိုင်သော မော်ဒယ်သည် စက်၏ဘေးကင်းမှုကိုပင် 24 ဗို့ဖြင့် ပါဝါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းသည့်စနစ်ပါရှိသော ဒေါင်လိုက် တယ်လီစကုပ်တိုင်တိုင်တစ်ခုနှင့် အမြင့်ဆုံးအမြင့်9မီတာ။
Kubota D1105 နှင့် D905 အကြား သင်နှစ်သက်သော အင်ဂျင်မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
လေးလံသောဘောင်၊ ရွေးချယ်နိုင်သောလမ်းနောက်တွဲနှင့် ဖေါက်ထွင်းမှုဆန့်ကျင်သည့် LED မီးလုံးများကဲ့သို့သော အရည်အသွေးမြင့်အင်္ဂါရပ်များသည် KLT-100OLED မီးမျှော်စင်ကို မိုင်းတွင်းဧရိယာများကဲ့သို့ ခက်ခဲသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် စံနမူနာပြဖြစ်စေသည်။
1. သင်သည် စက်ရုံ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပါသည်။စက်ရုံစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှကြိုဆိုပါသည်။
2. သင့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ပက်ကေ့ခ်ျတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုဂို သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအမည်ကို ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသလား။
သေချာပါသည်။ သင်၏ Logo ကို Hot stamping ၊ printing ၊ Embossing တို့ဖြင့် သင့်ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်တွင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အရင်းအမြစ်များနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်းရှိသ၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ပေးပို့ခြင်းဖြင့် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်ရန်နှင့် စစ်ဆေးရန် နမူနာမှာယူမှုကို ကြိုဆိုပါသည်။ရောနှောထားသော နမူနာများကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
KLT-10000LED ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် မှာယူရန်၊ 86.0591.22071372 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ www.worldbrighter com
ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန် 1960 ကီလိုဂရမ်
စုစုပေါင်း lumen 360000lm
အင်ဂျင် Kubota D1105/V1505
ဆလင်ဒါများ (q.ty) 3
အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း (50/60Hz) 1500/1800rpm
အရည်ပါဝင်မှု (110%) √
Alternator (KVA / V / Hz) ၈/၂၂၀/၅၀-၈/၂၄၀/၆၀
ပလပ်ပေါက် (KVA / V / Hz) ၃/၂၂၀/၅၀-၃/၂၄၀/၆၀
ပျမ်းမျှအသံဖိအား 67 dB(A)@7m
Led မီးအိမ် အလင်းရောင်မျှော်စင်
Led Lighting Tower ၊